ပွင့်လင်းရာသီတွင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဒုတိယ တစ်ကိုယ်တော် အခွေ ထွက်ရှိမည် - Yangon Media Group
ပွင့်လင်းရာသီ တွင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဒုတိယတစ် ကိုယ်တော်အခွေထွက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ဆောင်အဆို တော်ဇဏ်ခီက ပြောပါတယ်။
”အဆိုပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် နောက်ပိုင်းတစ်ခွေထွက်ဖို့ ထပ်လုပ်နေတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ စတူရီယိုမရောက်ဖြစ်တာနဲ့ သီချင်းတွေမသွင်းဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်လာမယ့် မိုးတွင်းမှာတော့ သီချင်းတွေသွင်း ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုရေးထားတဲ့သီချင်းတွေမှာလည်း ကျွန် တော်အရင်တုန်းကဆိုနေကျ Rock သီချင်းတွေပဲလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေမှာတော့ အခုခေတ်နဲ့ ပိုလိုက်ဖက်မယ့်သီချင်းတွေကို ရေးထားပါတယ်။ သီချင်းအကြောင်း အရာတွေကတော့ ဘဝအကြောင်း တွေ၊ ဒဿနတွေများပါတယ်။ ပွင့်လင်းရာသီလောက်တော့ထွက် ဖြစ်မှာပါ။ အခွေကိုတော့ ကျွန် တော် Audio ပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
”ကျွန်တော် အခုရှေ့ဆက် ရိုက်ဖို့အတွက် ဇာတ်ညွှန်းနှစ်ခုရေးထားပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ညွှန်း နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုတော့ အရင် ရိုက်ဖြစ်မယ်။ ဘယ်ဇာတ်ကိုအရင် ရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိသေးပါဘူး။ ဇာတ်တစ်ခုကအချစ်ဇာတ်တစ်ခု။ နောက်တစ်ခုကတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝတိုက်ပွဲတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီးရင်ဆိုင် တဲ့အကြောင်းတွေကို ရေးသား ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် တွေလည်း မစဉ်းစားရသေးပါဘူး။ အရင်တုန်းကလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ သရုပ်ဆောင်တွေ လူရွေးပွဲတွေ လုပ်ဦးမှာပါ။ ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာ ဟာသဇာတ်လေးတွေလည်း ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဘိုးတော်တစ် ယောက်ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုကို ဟာသအနေနဲ့ရေးထားတာပါ။ ရိုက်ဖြစ်ဖို့ကတော့လိုဦးမှာပါ”လို့ ပြောပါတယ်။ အခြားထုတ်လုပ်ရေးများနှင့် ပူးပေါင်းရိုက်ကူးခြင်းရှိ၊ မရှိမေး မြန်းမှုကိုလည်း ယခုလိုပြောပါတယ်။
”အခြားထုတ်လုပ်ရေးတွေ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကို ကမ်းလှမ်းထာတာတွေလည်းရှိပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်ရေးကလည်းရှိတယ်ဆို တော့ သူများထုတ်လုပ်ရေးမှာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရတာတော့ နည်းနည်းတော့အခက်အခဲရှိပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ် ရေးကိုပဲ ရှေ့ဆက်ပြီးဘတ်ဂျက် တွေကို ပိုမိုကြီးကျယ်တဲ့ဘတ်ဂျက် အကြီးကြီးတွေရိုက်ဖို့ စဉ်းစားပါ တယ်။ ကျွန်တော်သူများတွေကမ်း လှမ်းတာကိုချေးများတာမဟုတ်ပါ ဘူး”လို့ ပြောပါတယ်။
အီတလီတွင် ခြေထောက်ကျိုးခဲ့သော ကင်ဆာရန် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူ
နိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံမှ နောက်ဆုံးပေါ် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ မန္တလေးမြို့တော်ခန်းမ၌ပြသ
၂ဝဝ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ပြည်သူ၏အခန်းကဏ္ဍက အရေးကြီးဆုံးဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ??
ဝင်ဘလေ ခန်းမတွင် တစ်ကျော့ပြန် ဖျော်ဖြေခဲ့သော ဘရိုင်ယန်အဒမ်
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုကို မှားယွင်း ဆုံးဖြတ်မိပါက တရားစီရင်ရေး သမိုင်းတွင် အမည်းစက်ထင် သွာ??